Izinzuzo Zokunquma Izibophelelo Zentsapho Ezisibophayo
Ukusika Izibophelelo Zentsapho Ezisibophayo
Imida: Ukuchaza indawo Yakho Yomntu Yithi Cha! | Ukubeka iMida yeMida
Imvelaphi yobomi bethu bamandulo ivela kwintsapho esakhulela kuyo. Sithetha ngeeNtsapho Zomtshato kwaye sonke sinabo kungakhathaliseki ukuba sisiphi isimo seentsapho zethu. Lezi zibophelelo zentsapho ziqala ngamanani ethu ebuntwaneni. Ngokuqhelekileyo amagunya anamandla kakhulu kunamalungu entsapho, ingakumbi abo badlala indima yoMama okanye uBawo abanamandla.
Sonke siyaqonda ukuba kufuneka ukuba abantu abadala basifundise njengabantwana. Njengoko sikhula kwaye siphume ekugqibeleni siyaqala ukuwahlula kula manani amagunya kunye nokuphuhlisa umntu ngamnye.
Ukuba ngabantu abadala
Ukukhululeka okanye ukukhuphaza ukufeza kwethu ukuqhuba ukusukela ebuntwaneni, ngokusuka ekufikeni nasekufikeni komntu omdala kukungqinelana neentlobo ezinxulumene nazo iintsapho zethu. Uninzi lwamaphethini anemvakalelo kunye neendlela zokuziphatha zivela ekuziphatheni ngokwempawu emva kwegunya lokusukela ebuntwaneni bethu kunye nokuziphatha okufundayo. Singaba neenkolelo zonqulo okanye zokomoya esizifundisayo ukuba asisayi kuxhasa. Abazali bethu kunye noluntu lwabo bahlala beqhuba iindibano zentlalo engekho iimeko esizifuna ukuzenza ngazo. Kwaye ke, kukho ezininzi iinkolelo esiphila ngazo ezinokuthi zivela kwimimiselo yethu njengabantwana, okanye kwizigqibo esazithatha ngaphambi kokuba sibe nekhono lokwenza izigqibo ezifanelekileyo kunye nezigqibo.
Ezi nkolelo ezifunyenweyo, iimpawu kunye neempawu zemoya zingasinceda sonke ekudaleni ubomi esiyifunayo.
Sivame ukuba nomzekelo womzali esifuna ukufana nawo. Kwaye kwakungubawo. Ndandithanda ubaba kwaye ndifuna ukufana naye. Ndachukumisa ukuba ndibe ngumntu owamthanda ubaba.
Injongo ephambili kabawo ebomini kwakufuneka ibe mnandi ukuze kuthandeke. Njengoko ndiyilungisa indlela yakhe yokuziphatha ndazibeka ngamanye amaxesha ukuba ndihlawule ixabiso eliphakamileyo, nje ngenxa yokuba mnandi.
Le ndlela yokuziphatha kunye neemfundiso zonqulo endizifumana kubazali bam bobabini ukuba ukunikela kungcono kunokuba ndifumane kukukhokelela ukuba ndihlakulele ubuntu obungazi ukuba ndamkela njani kwaye ngubani owanikezela ekungenakulungile ngenxa yokuba andizange ndibe imida ephilileyo.
Ukufunda nokuziphatha okhethwe ngabantu abadala
Zonke iimfundiso esizifumana njengabantwana kwaye asinakukhetha malunga naloo xesha, sinokukhetha malunga nabantu abadala. Encwadini yakhe Unokuphulukisa Ubomi Bakho, uLouise Hay uthi le mfundiso engasisebenzisi njengabantu abadala "ifundwe ngento engafaniyo" kwaye sinokuyifumana ngokukhetha ukwenza oko kwaye senze umsebenzi wokwenza oko kwenzeke. Izinkolelo, iimvakalelo, ukuziphatha, ukuziphatha, ukomoya, kunye nezinye iinkalo zobomi bethu esifuna ukungazifumani zingachaphazela ngokulula ngokuCoca iiNxulumano nabazali bethu okanye imizekelo yabazali.
Ukuphila kwi-Intellectual Mind
Ukukhawula le mibopheleleko yentsapho ebophayo isinceda ukuba sibe ngabani ngakumbi ukuba singabonakalisa njani "ukungaziqondi".
Ngalolu nyathelo sithintela ngakumbi kwi-Intellectual Mind yethu ukuze sikwazi ukuhlala ngokubanzi kwiinjongo zayo. Kwakhona kuvumela abo sinqumlayo ukuba babe ngabanye babo ngokwenene njengoko kubakhupha nabo kule mibandela. Zomabini zombutho zikhutshwa kwiintlobo zengqondo ezibangelwa zizibophelelo zentsapho. Siyakwazi ukuhlakulela imida engcono kwaye singazifaki kwisimo sokunika okungaphezulu kunokuba sifanele sinike, okanye ukuba umntu athathe kuthi ngenxa yokuba abazange bafunde indlela yokufumana ngendlela ephilileyo.
Izinzuzo zokukhawula iziNdlo ezinezibalo zabazali:
Siphila ngakumbi kwi-Conscious Higness.
Ukuphulukiswa kwamaqhosha aphefumlelweyo kunye neempembelelo zomzwelo.
Ukuba ngaba umzali osika kumntwana, unokukunceda ekupheleni kweNest Syndrome.
Ukuba ngumntwana ukunciphisa umzali, kunokukunceda ukuphelisa isohlwayo lokuba ngubani thina kwaye akunjalo ukuba ngubani ocinga ukuba umzekelo wethu umzali ufuna ukuba sibe.
Unceda abantu bobabini ekusebenziseni ukukhululeka ukuba babe ngabani ngokwenene.
Unceda ukusibeka kwisithuba sokwenza imida engcono.
Unceda ukuphelisa nxaxheba nayiphi na inxaxheba esingaba nayo.
Ngokubanzi ikhuthaza kwaye isekele ukulinganisela ebomini bethu ngokunikezela okunempilo nokufumana.
U-Asante Penny (uFka Rita Loftsgard) ungumphili kunye nomcebisi onamava angaphezu kwama-25 anamava ngezinye iindlela. U-Asante usebenza ngokuphambili ngokuphilisa ngokomoya nangokwenyama. Ubona ngokukhethekileyo ekunqumeni iMida eyosibophayo kwaye isebenze ngeemimoya zengqondo. Usebenza ukusuka ekhayeni lakhe eCanada kodwa ukhonza emhlabeni jikelele njengoko zombini le ndlela iyakwenziwa kude.
Kutheni abantwana befana neDinosaurs?
I-Ustasha: Izigandane kunye neziNkokeli zeMfazwe
Indlela yokubhala i-Spell yakho siqu kwiiNtshukumo ezi-5
I-Shellbark Hickory, Iingqapheli ezinkulu zeHickory
I-Del-Vikings: Amaqela ayisithupha e-Doo-Wop kwelinye
Iingcamango zokudweba nokuPenda